IGARAJI IGUQULWE YABA LIGUMBI LOKUHLALA (IINGUQU EZIGUQULIWEYO) - IINGCAMANGO ZEGUMBI LOKUPHILA
Eyona Iingcamango Zegumbi Lokuphila Igaraji iguqulwe yaba ligumbi lokuhlala (iinguqu eziGuquliweyo)
Ukusuka kwigaraji ukuya kwindawo yokuhlala-yonke into ekufuneka uyazi malunga negaraji iguqulwe yaba ligumbi lokuhlala.
Ukuba unqwenela indawo yokuhlala eyongezelelweyo, kulula ukucinga ukuba kuphela kwenyani kukuhambisa indlu. Nangona kunjalo, njengoko imitya yesipaji iqiniswa kunokubakho okunye (kwaye kungabizi kakhulu!) Ukhetho olusondeleyo kufutshane nekhaya. Ukuba unethamsanqa elaneleyo lokuba ube negaraji ecaleni kwayo, okanye uqhotyoshelwe kwipropathi yakho - eyona ndlela ingabiza kakhulu inokuguqula esi sithuba sibe ligumbi elongezelelweyo.
Igaraji iguqulwe yoyilo lweGumbi lokuPhila
Iindleko zokuguqula igaraji ibe ligumbi lokuhlala
Iindleko zokuNyusa iGaraji lokuGcina ukuGuqulwa kwamaGumbi okuPhila
Ngaba ukuguqula igaraji ibe ligumbi lokuhlala yongeza ixabiso
Ngaphambi kokuba uluhlaze olu luvo, kufanelekile ukuba ucinge ngendlela oyisebenzisa ngayo ngoku indawo yakho yegaraji. Ngaba yindawo yokugcina yonke into engalinganiyo kwenye indawo ekhaya, okanye isetyenziselwa injongo yayo; ukuhlala emotweni yakho, okanye ezinye izinto ezifanelekileyo?
Ukuba ujonga igaraji yakho njengenxalenye ebalulekileyo yekhaya lakho njengoko injalo, ke oku akunakuba kokwakho. Nangona kunjalo, ukuba unengqondo evulekileyo kwaye unokubona ngeso lengqondo indlela isithuba esingasebenza ngayo ukudibanisa kunye nekhaya lakho lonke, kufanelekile ukuqwalaselwa. Xa ujonga iindleko zokwandisa ikhaya lakho, amaxabiso okuguqulwa kwegaraji akufuneki athathwe…
Ngaphambi kokuba uye phambili kwaye uguqule isithuba. Cinga ngoku kulandelayo:
ndisebenzise iilokhwe zomtshato kufutshane nam
Uza kuyisebenzisa njani indawo yakho entsha? Zithini izicwangciso zakho zeli khaya litsha?
Okokuqala, kuya kufuneka ucinge ngendlela ongathanda ukuyisebenzisa ngayo indawo eyongezelelweyo. Ngaba igumbi liya kusetyenziswa ngokwahlukeneyo nendlu iphela, kwaye lifaneleke njengeofisi okanye isifundo? Okanye ngaba igaraji igudle ikhitshi kwaye ke esona sibonelelo siphambili soguquko iya kuba kukwandisa umfanekiso wesikwere ekhitshini lakho?
Uya kufuna kwakhona ukuqaphela eyakho ubungakanani begaraji nokuba inkulu ngokwaneleyo ukulungiselela ubeko olifunayo.
Ukubeka iimpendulo kule mibuzo kuya kukunceda ubone ubungakanani bomsebenzi ofunekayo. Ngaba uyakudinga ukudiliza naziphi na iindonga zangaphakathi ukuze zidibane nesithuba? Okanye mhlawumbi wandise ukuphakama komgangatho ukuze uhlale ungenamthungo kunye nekhaya lakho liphela? Mhlawumbi iisilingi ziya kufuna ukuphakama?
Ezi zinto ziya kuba nefuthe kwiindleko ezicetywayo, kwaye zikunike umbono ombi wokuba uza kujonga malini kwinkcitho ngaphambi kokuba wahlule nayiphi na imali.
Umgangatho wegaraji yakho esele ikho
Kuya kufuneka ukuba uqwalasele umgangatho wegaraji yakho esele ikho, nokuba ingaba ikulungele na ukuguqulwa. Ezinye iigaraji ezakhiwe ngaphezulu kweminyaka engama-25 eyadlulayo zisenokungakulungeli ukuba ziphinde zenziwe kwakhona, nangona ulwakhiwo lwakutshanje olwenziwe ngezitena kunye nebhloko kufuneka lulungile. Jonga umvavanyi wasekhaya ukuze uqiniseke.
umbala womqolomba womntu
Ke kubiza malini ukuguqula igaraji ibe yindawo yokuhlala? Ukuguqulwa kwegaraji esemgangathweni unokuqikelela inkcitho phakathi kwe- $ 6,300- $ 9,500. Nangona kunjalo, iigaraji ziyafumaneka kuzo zonke iimilo kunye nobukhulu, ngazo zonke iindlela ezinokubakho, ke iindleko ngokubanzi zokugqibezela iprojekthi ziya kwahluka ngokuxhomekeke kwimeko nganye.
Ukwenza indawo yokuhlala entle ngokwenyani igaraji yakho esele ikho iya kufuna umsebenzi, kwaye kulapho iindleko zinokongeza ngokukhawuleza. Inkqubo ye- umnyango wegaraji kwigumbi lokuhlala uguquko luya kufuna ukutshintshwa ngokhetho olungqongqo lwemozulu, kwaye uya kufuna ukufaka ukukhanya kwendalo kwisithuba.
Kuxhomekeke kumgangatho wokugqitywa komnyango kunye nefestile (kunye nobungakanani), unokujonga ukuchitha i-600-700 yeedola- kwaye oku kusezantsi kwinqanaba lesikali. Imigangatho kunye nophahla nazo ziya kufuna ukujongwa. Ukufezekisa ukugqitywa okunqwenelekayo kumgangatho wakho, kusenokwenzeka ukuba kuya kufuneka kuqala ugalele kwisiseko sekhonkrithi ukuze uphume emgangathweni kwaye uwuphakamise. Oku kuyakuxabisa malunga ne- $ 1,200.
Igaraji yakho nayo ayinakulindeleka ukuba ube nophahla olunqwenelekayo olufunekayo ukuze uyihlanganise ngokufanelekileyo kwisithuba - oku kuthetha ukuba kuyakufuneka uhlawule isilingi ukuba inyuswe.
Ekunyuseni umgangatho ukuya kwii-intshi ezi-6 (15cm) ngaphezulu komgangatho wangaphandle womhlaba, uya kufuna i-7-8ft (2.2-2.4m) yegumbi eliyintloko, eliza kudinga ukufakwa kuhlahlo-lwabiwo mali. Kukwakho nezinto eziluncedo… Iigaraji ezininzi ziya kuba sele zinombane, kodwa zimbalwa eziya kufakelwa igesi namanzi.
Ngelixa oku kungafanelekanga ukubonisa ingxaki ukuba ucwangcisa ukusebenzisa indawo njengendawo yokuphumla okanye igumbi lokulala, akunakuthethwa okufanayo ngendawo yokuphekela okanye igumbi lokuhlambela. Ukongeza ii-electrics akubizi kakhulu - isokethi esitsha akufuneki sibize ngaphezulu kwe- $ 120, kodwa ukufakelwa kwerhasi kunye namanzi kuyakwenza njalo. Ukuba kukho imibhobho efuna ukuhamba, iindleko ziya kuvela kwi-1,200- $ 3,700.
Ngegaraji edibeneyo, ukuguqula indawo kunokuba yinto ye-DIY nangona ukuba unegaraji evalelweyo enotshintsho kulwakhiwo olufunekayo, kufanelekile ukuzisa umakhi. Ukuba usebenzisa ifemu yobungcali, amaxabiso anokuvela kwi-12,000 yeedola ukuguqula igaraji enye kunye ne- $ 18,000 yokuguqula isibini.
Ngelixa eli nani lisenokuziva linyukile, kuluncedo ukuzikhumbuza ngeendleko eziphezulu ngokuthe gabalala zokwandisa okanye ukuguqula indawo yakho yokuhlala. Ukuguqula igaraji yenye yezona zisombululo zibiza kakhulu xa kufikwa ekwandiseni indawo yakho.
Ungalibali, kukho nemirhumo yokucwangcisa enokubakho. Kuya kufuneka ujonge kwisebe locwangciso lwasekhaya ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga nale ndawo yakho.
Indlu yasefama yasekhitshini
Oku kuxhomekeke kakhulu kwiipropathi ezikufutshane kunye nokufumaneka kokupaka. Ukuba uhlala kwindawo apho ukupaka kunqunyelwe okanye kwi-premium, igaraji lakho liya kuba yinto enqwenelekayo xa uzama ukuthengisa. Nangona kunjalo, ukuba akukho zinkxalabo re yokupaka, okanye igaraji ayisetyenziswanga ngokwaneleyo njengoko injalo, ukuguqulwa kwegaraji yindlela eya phambili.
Ukuqhubeka nokuguqula igaraji kwigumbi lokuhlala kunokongeza i-avareji ye- $ 56,800 kwixabiso lekhaya lakho. Oku kusondela kusekwe kumndilili wexabiso lendlu ngamanani ezinto ezikwisikwere, kubandakanywa i-square footage esongezwa kwigaraji
Ayikho imfihlo yokwandisa imifanekiso eqingqiweyo yekhaya lakho yongeza ixabiso, kunye nokuguqulwa kwegaraji yenye yeendlela zokufezekisa oku. Ayitsho ngaphandle ukuba izibonelelo zeendleko ziyabetha-kutyalo-mali oluncinci, unokwenza inzuzo ebonakalayo yemali ukuba uthathe isigqibo sokuthengisa.
Ukuzama uyilo lwakho unokujonga enye ekhoyo Isoftware yoyilo lwegaraji iinkqubo zokucwangcisa ubeko lwakho.
Zimela ntoni oonobumba rsvp
Iindawo zomtshato ezizodwa england
Iimbadada zaselwandle eziluhlaza emtshatweni